Umkhuleko kamufi. ? Isikhumbuzo, Ukuba Othandekayo Ushonile futhi Muhle
7 Kufundwa iMin
Ukuthandazela oshonile. Kuyo singacela leyo miphefumulo esesendleleni yokuphumula okuphakade ukuze bathole ukuthula abakudingayo ngesikhathi esifushane kakhulu.
Impela abaningi bethu bahluphekile ukufa yomuntu osondelene kakhulu, akunandaba ukuthi wayeyilungu lomndeni noma umngani, okubalulekile ukuthi akasekho kulomhlaba, uye empilweni yangemva kokufa.
Kuthiwa uma ungamthandazeli umufi, nathi siyokhohlwa lapho kufanele sihambe ngaloyo mgwaqo.
Abanye abantu bavame ukukhanyisa amakhandlela futhi benze i-altare elikhethekile lokukhumbula othandekayo wabo ngenkathi bephakamisa imithandazo.
Kodwa-ke, le nkolelo ivame ukugxekwa yilabo abangaqondi kabusha futhi abangaphansi ngokomoya. Lababantu abezwakali, ngaleyo ndlela sigcina izinhliziyo zethu zihlanzekile.
1 Uyini umkhuleko wabafileyo?
1.1 Umkhuleko othandekayo oshonile
1.2 Imikhuleko yokuthi ufile
1.3 Kuthandazelwa abafileyo ngosuku lwabo lokuzalwa
1.4 Umkhuleko wamalungu omndeni oshonile (amaKatolika)
2 Ngabe imithandazo izomenza kahle umufi?
Uyini umkhuleko wabafileyo?
Kunenkolelo yokuthi, ezikhathini eziningi, abantu abafayo bebengakulungele ukubhekana naloyo mhlaba, yingakho sidinga ukukhulisa imithandazo yokuba umuntu oshonile athole ukuphumula kwaphakade.
Kukholelwa ukuthi kuleyo ndlela, umuntu oshonile angahlanza umphefumulo wabo ngomcabango ongcwele onjengomkhuleko.
Imvamisa kuyisiko ukwenza eminye imikhuleko ngemuva kokuba umuntu angcwatshwe umufi, kepha akwanele ukuqhubeka nalezi imithandazo Isikhathi eside ngisho lokhu kusiza ukulila nobuhlungu ngokuhlukaniswa ngokomzimba kwelungu lomndeni noma lomngane.
Kusenza sizizwe sengathi sixhunyiwe yize ibanga likude.
Umkhuleko othandekayo oshonile
Nkulunkulu, nguwe wedwa umnikazi wempilo.
Usinikeza isipho sokuzalwa sinenjongo futhi nangendlela efanayo lapho sikwenzile, usibizela embusweni wakho wokuthula, lapho ubheka ukuthi ukuthunywa kwethu kulomhlaba sekufeziwe.
Noma ngaphambi nangemva ...
Namuhla ngifisa ukuvela phambi kwakho ngokuzithoba okujulile futhi impela isicelo sami sizolalelwa.
Namuhla ngifuna ukunxenxa umphefumulo we (igama loshonile) owambiza ukuthi aphumule eceleni kwakho.
Ngiphakamisa lomkhuleko, kuwe mnumzane, ngoba ngisho nasezivunguvungu ezinkulu kakhulu ungukuthula okungenamkhawulo. Baba waphakade, nikeza ukuphumula epharadesi lomphefumlo wakho nombuso wakho kulabo asebewushiyile lo ndiza lwasemhlabeni.
UnguNkulunkulu wothando nentethelelo, thethelela ukwehluleka nezono zalo mphefumulo osuseceleni kwakho futhi umnikeze impilo engapheli.
Futhi, ngiyakucela baba, kubo bonke labo abaye badabukisa ukusuka komuntu ongasasebenzi ngokudabukisayo, vula inhliziyo yakho futhi ubabathande ngothando lwakho. Banike ukuhlakanipha, ukuze baqonde ukuthi kwenzekani.
Banike ukuthula ukuze bazole ngezikhathi ezinzima. Banike i-discacity ukunqoba ukudabuka.
Ngiyabonga mnumzane ngokungilalela namhlanje ngalo mkhuleko engiwuphakamisela kuwe ngokuzinikela, ukuze ngesihe nokuthula, unikeze ukuthula labo abangenakho ngalesi sikhathi.
Qondisa izinyathelo zabantu manje abazihlukanisayo futhi ubenze bajabulele injabulo yempilo.
Ngiyabonga Baba, amen.
Uwuthande umthandazi wabafileyo?
Ngemuva kokufa, kukhona abaqinisekisiwe, ukuthi omunye umzuzu wokuzihlanza ungaphila, ukuthi akuyona yonke into elahlekile kepha ukuthi sinelinye ithuba.
Ezwini likaNkulunkulu sibona ezinye izinkomba zokuthola intethelelo kulomhlaba noma lapho kuzokuza khona; UJesu Kristu uqobo ukusho komunye wemihlangano yakhe eyisimangaliso.
Kuyiqiniso esingakwazi ukuphunyula kulo, ngaphandle kwalapho sihlwanyela ngakho kusasa omunye umuntu uzosenzela ngendlela efanayo.
Imikhuleko yokuthi ufile
Ah Jesu, okuwukuphela kwenduduzo emahoreni angapheli obuhlungu, okuwukuphela kwenduduzo ekuswelekeni okubangelwa ukufa phakathi kwabathandekayo!
Wena, Nkosi, amazulu nomhlaba, nomhlaba nabantu bambona belila ngezinsuku ezidabukisayo;
Wena, Nkosi, obekhale ngezinsusa zesisa esikhulu sothando ethuneni lomngane wakho omthandayo;
Wena, oh Jesu! ukuthi wadabukela ukulila kwekhaya elaphukile nezinhliziyo ezibubula kulo ngaphandle kokududuzeka;
Wena, Baba onothando olukhulu, uzwela nathi izinyembezi zethu.
Bheka kubo, Nkosi, ukuthi ligazi kanjani lomhelo ozwa buhlungu, ngokulahlekelwa yilowo owayengumngane othandekayo othandekayo, umngani othembekile, umKristu oshisekayo.
Babheke, Nkosi, njengempahla esiyinikelayo ngomphefumulo wakho, ukuze uyihlanze egazini lakho eliyigugu futhi ulithathe masinyane ezulwini, uma ungakakujabuli ngalo!
Babheke, Nkosi, ukuze usinike amandla, ukubekezela, ukuvumelana nentando yakho kulolu vivinyo olukhulu oluhlukumeza umphefumulo!
Babheke, oh kamnandi, oh uJesu onobuhle kakhulu! futhi basinikeza ukuthi labo lapha emhlabeni abake baphila beboshwe ngezibopho zothando eziqinile, futhi manje sikhalela ukungabi bikho kwesikhashana,
Ngaphandle kokungabaza, enhle umkhuleko othandekayo oshonile.
Imikhuleko emnandi kakhulu ngomufi yilena eyenziwe ngenhliziyo futhi lapho sikwazi ukukhipha konke esikugcina enhliziyweni.
Siyabuza sokuphumula kwakhe okuphakade, ngenxa Sengathi ngingathola ukuthula okudingayo
Ngokunjalo sicela ukuthi asisigcwalisele amandla futhi sikwazi ukunqoba isikhathi esinzima okungenzeka ukuthi sibhekene naso.
Kuneminye imikhuleko engasebenza njengomhlahlandlela, ikakhulukazi kulezo zikhathi lapho amagama engaphumi khona ngenxa yobuhlungu nosizi.
Kuthandazelwa abafileyo ngosuku lwabo lokuzalwa
Hawu Jesu olungileyo, owathi empilweni yakho yonke waba nesihe ebuhlungwini babanye, ubheke ngesihe emiphefumulweni yabathandekayo bethu abasePurigatori.
O Jesu, owathanda owakho ngokuzimisela okukhulu, lalela isicelo sethu esikucela kuwe, futhi ngomusa wakho unike labo obathathe ekhaya lethu ukuba bajabulele ukuphumula kwaphakade esifubeni sakho infinito amor.
Banikeze, Nkosi, ukuphumula okuphakade futhi kwangathi ukukhanya kwakho okungapheliyo kungabakhanyisela.
Kwangathi imiphefumulo yabathembekile isukile ngesihe sikaNkulunkulu ingaphumula ngokuthula.
Uma ufuna ukuthandaza kwilungu lomndeni, lo ngumthandazo ofanele ngabafileyo.
Ukukhumbula ilunga lomndeni noma umngani oshonile ngosuku olubalulekile, ezikhathini eziningi, akunakugwenywa.
Lokhu kungenxa yokuthi kube yizikhathi zokugubha futhi hhayi ukuthi lowo muntu uzizwa engelutho, noma kunjalo kunemithandazo noma imithandazo ekhethekile okufanele yenziwe ngalezozinsuku.
Kungaba usuku lokuzalwa, umshado noma ezinye olunye usuku olubalulekile.
Into ekhethekile ngakho konke lokhu ukungayikhohlwa futhi ubuze noma ngabe ukuphi kungaba nokuthula futhi kuthule futhi lokho qhubeka uqinise labo abasele endizeni yasemhlabeni.
Kwesinye isikhathi kuyisiko ukuhlangana namanye amalungu omndeni bese wenza imithandazo ekhaya, khumbula ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi uma ababili noma abathathu benobuhlakani bokucela okuthile egameni likaJesu, uBaba osezulwini uzonikeza isicelo senziwe.
Umkhuleko wamalungu omndeni oshonile (amaKatolika)
Nkulunkulu, wena onika intethelelo yezono futhi ufuna ukusindiswa kwabantu, sinxusa isihawu sakho ukuze ubasekele bonke abafowethu nabahlobo abahamba kulomhlaba.
Banikeze embusweni wakho impilo engapheli.
Lo ngumkhuleko wabafushane, kepha muhle kakhulu!
Ukuthandazela umufi kungenye yezinkambiso ezindala kakhulu ibandla lamaKrestu elizungezile el mundoSekuyimfundiso ukukholwa ukuthi abangasekho basendaweni lapho behlanjululwa khona ukuze bangene embusweni wezulu.
Le yindawo yokuphumula uNkulunkulu abenzele yona ikakhulukazi, lokhu kukhombisa uthando olungenamkhawulo iNkosi olunayo ngesintu.
Hlanganani njengomndeni Ukuthandazela ilungu lomndeni oshonile noma ukucela iMisa lapho singenza khona imithandazo ekhethekile kanye nemikhuleko kanye nabangane namanye amalungu omndeni kuyisiko.
Lokhu kusebenza futhi njengenduduzo, njengophawu lokuthi asikukhohliwe umndeni wethu nokuthi sizophinde sihlangane ndawonye.
Ngabe imithandazo izomenza kahle umufi?
Inhloso yomkhuleko kwabafileyo ukuthi. Cela usizo, usizo, ukuvikelwa nenjabulo kulowo muntu ongasekho phakathi kwethu.
Kuzokwenza kahle kuphela. Uma uthandaza ngokholo nangothando olukhulu kuyokulethela izinto eziningi ezinhle, zombili kamufi nakithi.